Putin iyo suntii cadawga loo qooshi jiray - BBC News Somali
Hay'adda sirdoonka Ruushka waxaa lagu magacaabaa FSB, mana ahan magac ay dadka inta badan garanayaan, balse waa hay'ad meelo badan oo adduunka ka mid ah ka hawlgashay, gacanteedana ay gaartay, waliba marar badan si arxan daro ah.
Asal ahaan waxa ay kasoo jeedaa laantii sirdoonka booliiska Midoowgii Soviet ee loo aqooni jiray KGB, waxaana jira sheegashooyin ah dilal ay dowladda go'aamisay iyo xiriir dhow oo ay FSB la leedahay madaxweyne Putin.
Waxaa kale oo ay hay'adan ka hawlgashay dalalka Georgia iyo Ukrain oo ay ka dhaceen kacdoono ka dhan ah Ruushka.
Image caption Litvinenko (midig) ayaa dadkii ay FSB ka wada shaqaynayeen ku eedeeyey musuqmaasuq sanadkii 1998-dii.
Balse dilkii loo geystay ninkii Ruushka u dhashay ee Alexander Litvinenko ayuu ahaa waxa shaaca ka rogay falalka hay'adan FSB.
Image caption Xarunta weyn ee FSB
Shaqooyinka ay qabato hay'adan waxaa kale oo ka mid ah uruurinta siraha iyo xogaha dalalka kale, waxayna adduunyada u dirtaa basaasiin tiro badan.
Tusaale hay'adaha sirdoonka Maraykanka waxa ay sheegeen in ay aaminsanyihiin in Ruushka ay u dhaceen habka kumbuyuutaraadka doorashadii Maraykanka, farogalina ku sameeyeen natiijada.